Madasha Dhaqaalaha Adduunka (World Economic Forum)
Sanad walba bisha janaayo dhammaadkeeda waxaa magaalada Davos ee dalka Iswiisarland isugu tago wafti ballaaran oo ka wada hadlo dhaqaalaha adduunka iyo sida loo kobcin lahaa. Waftigaan ayaa ka kooban madax waddameed, madax shirkadeed iyo milkiilayaasha shirkadaha adduunka ugu waaweyn iyo waliba tujaar maalgashato meelo kala duwan.
Shirkaan wuxuu soo jiitaa indhaha hayadaha horumarinta iyo la dagaalanka gaajada ka shaqeeyo kuwaasoo soo saaro warbixinno ay ku iftiiminayaan caddaalad darrada maanshaysay dhaqaalaha adduunka iyo sida dadka saboolka ugu dulmanyahay dunida sii hodmaysa.
Hodantinnimada saafida ah ee adduunku aad ayay u kobacday. Ilaa sanadki 2000, hodantinnimada saafida ah (net wealth) waxay korortay qiyaasti $114 tiriiliyan waxayna gaartay guud ahaan $280 tiriiliyan.
Maraykanka ayaa dhaqay waddan walba waxayna gaartay hodantinnimadiisu $93 tiriiliyan. Midda Shiinaha ayaa korortay 300% muddadaan waxayna gaartay $29 tiriliyan taasoo ka dhigtay waddanka labaad ee adduunka ugu hodansan. Afrika oo shacab ahaan dheer Shiinaha 200 oo milyan oo qof ayaa hantideedu tahay $2.5 tirilyan kaliya.
Sawirka waxaa sii foolxumeeyay in 1%-ka ugu qanisan dunida ay hantidoodu la simantahay 99%-ka kale. Hantida guud ee adduunku waxay korortay in ka badan $9 tiriliyan inti u dhaxaysay 2016 iyo 2017. 82% xoolahaan waxay si toos oogu dhaceen 1%-ka dunida ugu qanisan. 50%-ka ugu saboolsan dunida wax u kordhay ma jiraan muddadaan.
Warbixin ay daabacday hayadda OXFAM waxaa lagu sheegay in shanti doolar ee dunida kusoo siyaaddayba ay afar qaateen kuwii markii horaba qaniga ahaa. Haddaba tani maxay ooga dhigan tahay dad kala duwan ee adduunka ku nool?
Xaqiiqdu waxay tahay, taajiriinta ayaa si waalan u faaiidayo. Bilyanneerrada adduunka oo 90% ay yihiin rag caddaan ah, ahna kuwa hadda ku shirsan Davos aad ayay ugu faraxsan yihiin xoolaha jeebabkooda ku aruurayo. Hadba inta uu dhaqaalaha dunida kordho ayuu kooda sii laba-laamayaa. Suuqa u xiran (monopoly) ee aysan cid kale kula tartami karin ayaa u sahlay inay si fudud u qaataan wixii xoolo dunindu abuurto. Asbuucaanna waxay u shirsan yihiin sidii arrintaas loo sii adkayn lahaa.
50%-ka dunida u saboolsan ayaan wax hanti-koror ah helin sanadkii tagay, inkastoo ay ahaayeen kuwa sida dhabta u xamaalay. Xamaali xoolo dhalin waayay. Dunida soo korayso, dadka shaqeeyo haddana faqrikoodu sii kordhayo ayaa aad u kobcay.
Waxaa kaaga sii daran, shaqaalaha dunida sadexaad xamaaliga waxaa u dheer, caddaab xagga shaqada ay kala kulmaan, sida haybsooc, lacag yaraan, in loo diido waxay shaqaysteen, cay iyo aflagaado ay kala kulmaan kuwa ay u shaqeeyaan iyo waliba gacanqaad mararka qaar jareexooyin u gaysto. Waxa ay soo saaraan xamaalatadaan waa xoolaha ku dhaco jeebka kuwa ku shirsan Davos.
In kastoo ay hoos u dhacday tirada guud ee dadka ku nool faqriga xaddhaafka ah ee dunida, haddana horumar badan la gaari mahayo inta xoolaha dunida si aan caddaalad ahayn dad yar joobkooda ugu dhacayso. Waxaa si xowli ah u ballaaranayo farqiga u dhaxeeyo qaniga iyo saboolka. Dhibkaasna waxaa asal u ah nidaamka aan caddaaladda ku dhisnayn ee lagu saleeyay dhaqaalaha dunida.
Waxa socdo foolxumadooda waxaa kaaga filan in kuwii ay ahayd in lala xisaabtamo xoolaha ay dulmiga ku sameeyeenna qaar masaakiinta looga qaado laga sugayo inay shirkooda ka soo saaraan ajandayaashi dhaqalaaha adduunku ku shaqayn lahaa sanadka soo socdo!